Sida loo barnaamij u sameeyo amarada Kaaliyaha Google | Androidsis
Runta in ay shaqeynta ka dambeysa "Ok Google, nalka ku dem 10 daqiiqo" waa wax aan caadi ahayn waxaanan ku bari doonnaa inaad barto barnaamijyada amarrada kaaliyaha Google ee ku anfacaya maalintaada.
Hadda anigu ma noqon lahaa ma xuma in G weyn uu ku celceliyay shaqadan si aan uga helno cod amarka oranaya "Ok Google, ku jooji taageere 25 daqiiqo", ama "Ok Google, ku dami Netflix 1 saac gudahood". U tag.
1 Sida loo barnaamijyo amarrada Kaaliyaha Google
2 Sida loo qaabeeyo Saacadaha Kaaliyaha Google
Sida loo barnaamijyo amarrada Kaaliyaha Google
In kastoo Aynu haysanno Jadwalka Google ee amarrada Kaaliyaha Laga soo bilaabo Google ama Kaaliyaha Google, weli waxaa jira boosas badan oo kaaliyaha ah oo uu ku sii fiicnaan karo. Waa run inay aad u wanaagsan tahay in la shido nalalka qolkeena fadhiga iyadoo nalka ku xiranyahay WiFi, laakiin, kawaran hadaan dhahno "Ok Google, nalka ku dem 30 daqiiqo", anaga oo og in aan usocono in la seexdo, iyo in midkoodna aan waqti u heli doonin in aan ku yeelno amarka xiritaanka?
Hagaag, sheeko xariir. Tani waa waxa haysta ka helay horumariyehan horumarinta XDA iyo in halkan laga bogaadiyo. Waxa kaliya ee aan ahayn app aan si fudud u rakibi karno. Waxaan u baahan doonaa inaan socodsiino xoogaa lambar ah, laakiin ma jiraan wax dhib ah inta aan ka fahmayno xoogaa Ingiriis ah buugan.
Waqtiga loogu talagalay Kaaliyaha Google waa aalad furan taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan barnaamij ka sameysano Kaaliyaha Google, caawino howlo kala duwan oo kala duwan iyo adeegsiga kiisaska si gurigeena looga dhigo "smart".
Mashruuca hadaad isticmaasho borotokoolka 'IFTTT' iyo web serverka si aad ula xiriirto Kaaliyaha Google iyo qalabkaaga casriga ah. Mar alla markii wax walba la qaabeeyo, waxaad soo diri kartaa amarro sida "Ok Google, dami nalalka 10 daqiiqo kadib" oo waxay ku dhaqaaqdaa ficil wakhtigaas cayiman ka dib.
Taasi waa, waxay mas'uul ka noqon doontaa kordhinta tilmaamaha si markaa ay suurtagal u tahay in lagu isticmaalo muddadaas la sheegay amarrada sida "Waayahay Google, ku taageer taageere 25 daqiiqo gudahood", taasina waxay mas'uul ka tahay dirista mid isla markiiba dhamaadka aakhirka markay wakhtigeedu dhammaato mid kale ayuu diri doonaa.
Sida loo qaabeeyo Saacadaha Kaaliyaha Google
Faahfaahin badan ma geli doonno, laakiin haa, waxaan ku siineynaa xiriiriyeyaasha labada dariiqo inaad awood u yeelato inaad saacad u siiso Kaaliyaha Google. Waxaan rajeyneynaa in mar uun mashruucan la cusbooneysiin doono waxaanna siin karnaa hab fudud oo aan ku qaabeyn karno mashruuca laftiisa.
Sidaan soo sheegnay, Waqti u Caawiyaha Google si toos ah ulalama xiriiro aaladaha casriga ah, laakiin u isticmaal IFTTT inuu yahay qalabka isgaarsiinta. Markii aan codsaneyno Kaaliyaha Google "inaan damiyo aaladda 5 daqiiqo kadib", waxay amar u dirtaa IFTTT, taasina waxay noqoneysaa codsi HTTP ah oo ku saabsan adeegahaaga oo wata magaca qalabka iyo halbeegga.
Marka waqtigaasi dhammaado, ayaa Server wuxuu codsi websaydh ah u gudbin doonaa IFTTT, iyo inay "u sheegi doonto" Kaaliyaha Google inuu damiyo qalabka. Xaqiiqdii, waxaan u baahanahay inaan marwalba haysanno server-ka Node.js ee IFTTT la xiriiri karto, in kasta oo uusan u baahnayn inuu ahaado isla isla shabakada WiFi.
Wakhtiga loogu talagalay Kaaliyaha Google - Github
Halkaas waxaad ka heli kartaa iskuxiraha mashruuca iyo kaas oo qaarna lala qaadanayo imisa talaabo oo la raacayo notepad inaad fahamto waxyar oo ingiriisi ah waxaad awood u yeelan doontaa inaad qalab firfircoon yeelato. Sidii aan soo sheegnay, waa mashruuc il furan, markaa waxaad marin u leedahay inaad dib u eegto lambarka.
Marka way awoodaan barnaamijka amarrada Kaaliyaha Google taas ayaana runtii naga dhigtay inaan dooneyno, waqti uun, Google wuxuu awood u yeelan doonaa inuu shaqadan u keeno kaaliyaha laftiisa, midkaas horeba waxay u leedahay in ka badan 500 milyan oo isticmaale adduunka oo dhan
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo abaabulo amarada kaaliyaha Google sida "Ok, google wuxuu ku damiyaa laydhka 10 daqiiqo"